Ra'iisul wasaaraha Giriigga oo iscasilay - BBC Somali
Ra'iisul wasaaraha Giriigga oo iscasilay
Image caption Mr Tsipras waxa uu ku faanay in dowladdiisa ay dhanka dhaqaalaha wax ka qabatay
Ra'iisul wasaaraha Giriigga, Alexis Tsipras, ayaa ku dhawaaqay inuu is casilay, doorashana la qaban doono.
Mr Tsipras ayaa inuu xilka ka degay kaga dhawaaqay khudbo toos ah oo uu TV ka jeediyay.
Waxa uu sheegay in marxaladdii dhibka badneyd ee wadahadallada Giriiga uu kula galay deenbixiyayaasha in hadda ay dhammaatay, waxa uuna tilmaamay in hadda dalka ay masuuliyad ka saaran tahay sida uu u aqbalayo heshiisyada iyo go'aan ka gaaristooda.
Waxa uu sidoo kale hoosta ka xariiqay inuu hadda ku faraxsan yahay guulaha ay dowladdiisa gaartay. Laakiin weli Mr Tsipras waxa uu taageero buuxda ka haystaa shacabka dalkaasi, sida uu sheegayo, Yannis Palailogos, oo ah weriye ka tirsan wergeyska Kathimerini,
Lakiin Mr Tsipras waxa uu wajahayaa mucaaradaad xoog leh oo kaga imaaneysa xisbigiisa dhexdiisa, iyagoo ku eedeynaya inuu qaatay oo uu aqbalay heshiiska aad u adag oo Gunti-giijiska ah, si uu u helo 95 bilyan oo dollar oo deen ah.